asylum seekers Archives – Nehanda Radio
Apr 14, 2022 29,902
‘He’ll be killed’: Fears for UK asylum seekers threatened with deportation under…
Zimbabwean asylum seekers who were forced to attend meetings with officials from their home country have been threatened with removal, in a move believed to be part of an agreement to “repatriate” thousands of failed asylum seekers to the…
Jun 7, 2017 8,303
Feb 15, 2014 328
Stanley Phiri cannot take the most basic of needs for granted. The 21-year-old Zimbabwean has no permission to work and is dependent on charities to feed and clothe him. I met him at Common Grounds coffee shop in south Belfast, where he…
Sep 7, 2013 347
Jul 4, 2012 335
Concern has once again been raised for the safety of a UK based Zimbabwean activist, facing a second deportation threat by the British authorities this week. Nottingham based Trevor Chanetsa is set to be forcibly removed Wednesday night
Jun 18, 2012 347
Attempts by the British Government to force Zimbabwean asylum-seekers to return home and lie about their political allegiance to avoid persecution will be challenged in the Supreme Court today.
Dec 3, 2010 219
UK - A 37-year-old Zimbabwean man from Brierley Hill who got jobs as a care assistant and a mental health nurse using false documentation has been jailed for seven months. Judge John Warner at Wolverhampton Crown Court told Richman…
Jul 5, 2022 46,345